Abayishumi nambili bashonile engozini yetekisi eKwaZulu-Natali | Scrolla Izindaba
Abayishumi nambili bashonile engozini yetekisi eKwaZulu-Natali
Kusengamaviki nje ngemuva kokuthi kube nengozi enyantisa igazi ebandakanya izimoto ezine eduzane nase-Greytown eyabulala abantu abayi-13.
Manje iKwaZulu-Natali (KZN) izilela ukwedlula emhlabeni kwabanye abantu abayi-12 abashonile engozini yemoto e-Kilimoni eduze nase-Underberg ngoMgqibelo ntambama.
Kusolakala sengathi umshayeli wehlulekile ukulawula itekisi, yaginqika yaze yayoma odongweni lomfula.
Okhulumela umnyango wezokuthutha eKwaZulu-Natali uGugu Sisilana uthe: “abathathu abasinde kule ngozi balimele bangeniswa esibhedlela. Kukholakala ekutheni ingane encane iphuma emndenini owodwa nalabo abayi-12 abalahlekelwe yizimpilo zabo.”
Akukakacaci ukuthi itekisi beliqhamuka kuphi.